Dhacdadii saddexda Qorax | Saadaasha Shabakadda
El Ifafaalaha saadaasha hawada Halyeeyga maanta wuxuu umuuqdaa inuu kasoo baxay sheeko sheeko male-awaal saynis ah, laakiin dhab ahaantii wax khayaali ah oo ku saabsan arintaas ma aha ... waa wax aad u dhab ah waxayna ka dhacdaa Dunida aad iyo aad in ka badan sida aan filayno. Waxaa loo yaqaanaa "ifafaalaha saddexda qorraxood" waxayna bixisaa aragti layaableh oo saddex geesood ah oo ku saabsan xiddigeenna.
Dabcan, maahan in Qorraxdu tarantay, laakiin inay sabab u tahay a saamaynta indhaha waxaa sababa iftiinka qorraxda ee kareemada barafka yar ee daruuraha ku dhex jira. Xaaladdaan, waxay kaga duwan tahay kuwa kale ee aan wax ka qabanay (sida qaanso roobaad).
Khadadkaan hoose, waxaad ka arki kartaa dhowr ka badan sawirada ee dhacdadan xiisaha leh:
Macluumaad dheeraad ah - Sawirro qaanso roobaad dabka
Sawirro - io9, Cimilada Hawada iyo Dhulgariirka, Hadda waad ogtahay
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Ifafaalaha sadexda qorraxood